Kungani Inkampani Yakho Kufanele Isebenzise Ingxoxo Ebukhoma | Martech Zone
Sixoxe ngezinzuzo eziningi zokuhlanganisa wengxoxo bukhoma kuwebhusayithi yakho kwenye yethu ama-podcast wokumaketha. Qiniseka ukuthi uvula! Ingxoxo ebukhoma iyamangaza ngoba izibalo zinikeza ubufakazi bokuthi azikwazi ukusiza kuphela ukuvala ibhizinisi eliningi, futhi zingathuthukisa nokwaneliseka kwamakhasimende kule nqubo.
Amakhasimende afuna usizo kepha, ngombono wami, awafuni ukukhuluma nabantu. Ukushaya ucingo, ukuzula ezihlahleni zefoni, ukulinda ubambe, bese uchaza inkinga ngocingo kungakhathaza kakhulu. Ngesikhathi omele ikhasimende ephendula, ikhasimende selivele licasukile. Ingxoxo ebukhoma inikeza izikhathi zokuxazulula ngokushesha nezimpendulo ezisheshayo - okunikeza umuzwa ongcono wamakhasimende.
Ingxoxo ebukhoma iya ngokuya ibaluleke futhi inenzuzo njengeplatifomu yokubandakanya amakhasimende. Eqinisweni, kunhlolovo olwenziwe ngu Forrester, 44% yabaphenduli bathi ukuba nomuntu ophilayo ophendula imibuzo yabo ngenkathi besephakathi nokuthengwa online kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezinganikezwa yiwebhusayithi.
Izinzuzo ezingeziwe zezinkampani ezihlanganise ingxoxo ebukhoma zibandakanya:
Ukuthengisa okwandisiwe - Amakhasimende angama-51% maningi amathuba okuthenga. Abathengi abangama-29% maningi amathuba okuthi bathenge ngenketho yengxoxo ebukhoma noma bengayisebenzisi.
Ukuguqulwa okwandisiwe - I-Rescue Spa inyuse amazinga abo okuguqulwa ngo-30% ngengxoxo ebukhoma.
Ukugcinwa okwengeziwe - Amakhasimende angama-48% maningi amathuba okubuyela kuwebhusayithi.
Ukwandiswa komkhiqizo - 41% wabathengi abaku-inthanethi bathembela umkhiqizo lapho bebona ingxoxo ebukhoma.
Ukwandiswa kwesipiliyoni samakhasimende - 21% wamakhasimende athi ukuxoxa kuyabasiza ukuthi bathenge ngenkathi besebenza. Ama-51% wamakhasimende akhetha ukuvumela ukwenza imisebenzi eminingi elula ngenkathi elindile.
Abahlinzeki Beplatifomu Yengxoxo Ebukhoma
Ezinye izinkampani ezikulo mkhakha ziyi BoldChat, Xoxa, ChofozaDesk, I-Comm100, UsizoOnClick, iAdvize, UKayako, I-Live Chat Inc, I-Live2Chat, Phila Usizo Manje!, I-LivePerson, I-LiveChat yami, Olark, SightMax, SnapEngage, ThintaCommerce, Okufana nomsebenzisi, Velaro, IwebhusayithiAlive, I-WhosOn futhi - abadali bale infographic - Zopim (nge I-Zendesk).
Nayi i-infographic ephelele emangalisayo evela kuWebhusayithi Builder, Izizathu eziyi-101 zokuthi kungani udinga ukwamukela ingxoxo ebukhoma:
Tags: BoldChatigama lomkhiqizobaxoxeXoxaChofozaDeskI-Comm100Ukuguqulwaisipiliyoni samakhasimendeUsizoOnClickiAdvizeUKayako Fusionwengxoxo bukhomaI-Live Chat IncI-Live2ChatI-LivePersonI-LiveChat yamiOlarkukugcinwaUkunika Amandla UkuthengisaSnapEngageOkufana nomsebenzisiVelaroIwebhusayithi BuilderIwebhusayithiAliveI-WhosOnzendeskZopim
Izindlela ezi-6 ezihamba phambili okufanele uzilandele lapho wakha ikhasi lokungabhalisi
Nov 1, 2016 ngo-5: 54 AM
Ukuqonda okumangalisayo! Ngihlala ngiyithanda lapho iwebhusayithi inengxoxo ebukhoma, ikwenza kube lula kakhulu ukuxhumana nokusekelwa kalula.
Dec 28, 2016 ku-4: 51 AM
I-athikili enhle ebhalwe ngengxoxo ebukhoma yokwengeza ukuguqulwa nezinga lokwaneliseka kwamakhasimende. Ngisebenzisa ithuluzi lengxoxo ebukhoma kuwebhusayithi yami isilinganiso sami sokuguqulwa sikhuphuka ngama-70% futhi okubaluleke kakhulu ukuthi impendulo yami yombuzo wamakhasimende ngesikhathi ithengise ukwanda kokuthengiswa kwamakhasimende.